Fanaraha-maso ny Herbivores | Reef Resilience
Satria salama herbivorous Ny populaire dia afaka mitahiry macroalgae amin'ny vatohara be loatra na manakana ny fandraisana mpiasa amin'ny haran-dranomasina, manan-danja tokoa izy ireo amin'ny faharetan'ny haran-dranomasina. Noho izany antony izany dia mety ho iray amin'ireo fampahalalana tena mahasoa indrindra amin'ny fihanaky ny haran-dranomasina ny habetsahan'ny fambolena voajanahary, indrindra ireo trondro voajanahary.
Ireo trondro voajanahary dia azo zaraina ho vondrona efatra mahazatra, mifototra amin'ny andraikiny amin'ny fanaraha-maso ny fivoaran'ny algoly sy ny fitazonana ny fantsom-bary amin'ny fitrandrahana haranitra:
Scrapers / small excavators
Fitaterana lehibe / bioeroders
Ny vondrona tsirairay miasa any ambony dia manome anjara biriky manan-danja ho an'ny haran-dranomasina. Ny haran-dranomasina mahazaka dia matetika manana karazana biby izay afaka manatanteraka ireo asa rehetra ireo (fahasamihafana eo amin'ny sehatra), ary mety manana karazan-karazany mihoatra ny karazany (asa fanontam-pirinty).
Ny fanaraha-maso ny trondro voa dia azo atao amin'ny fomba amam-panao, ary azo ampidinina mora foana amin'ny programa fanaraha-maso ny trondro. Firaketana tanteraka ref dia afaka manoro ireo manampahefana izay te hampiditra ny trondro voa aty amin'ny fandaharam-potoana fanaraha-maso.
Ny papyrus ember (Scarus rubroviolaceus) sy ny parrotfish Bullethead dia ohatra amin'ny fako / vaky kely. Sary © Stacey Kilarski
Scrapers / small excavators Maka aotomobilina tsy misy fako ary manaisotra ala, sedimenta ary fitaovana hafa amin'ny alalan'ny fambolena na fanasitranana ny vatan'ny vatohara, mamela marika maranitra maranitra eo amin'ny vatohara ony. Anisan'izany ny ankamaroan'ny parrotfish (Hipposcarus ary Scarus karazam-biby). Ny mpanodina sy ny tantsaha madinika dia manampy amin'ny fanaraha-maso ny fametrahana sy ny fampiroboroboana ny macroalgae raha mitombo be epilithic algal turf ary manome faritra ho an'ny fantsona madio ho an'ny fandraisana mpiasa amin'ny vatohara
Bullethead parrotfish (Chlorurus spilurus) dia mpandahateny lehibe / bioeroiders izay mitana andraikitra amin'ny harena voajanahary. Sary © Stacey Kilarski
Fitaterana lehibe / bioeroders dia mpikaroka goavana indrindra amin'ny vatohara, manala ny vatohara maty ary manazava mafy ny matanjaka amin'ny vatohara ho an'ny fisorohana ny haran-dranomasina. Famokarana karazana (Bolbometopon muricatum ary ny rehetra Chlorurus karazany) tsy mitovy amin'ny scrapers amin'ny alàlan'ny fihinana lalina kokoa ary manaisotra substrata betsaka kokoa isaky ny manaikitra. Izy ireo dia ahitana olona lehibe rehetra misy karazany mihady (olona> lava 35 cm ny halavany).
Ny Achilles tang (Acanthurus Achilles) dia gera / detritivores. Sary © Stacey Kilarski
Grazers / detritivores Maniry mafy ny alim-pitondran'ny alikaola, izay afaka mametra ny fametrahana sy ny fitomboan'ny macroalgae. Tsy toy ny parrotfishes ny grazers dia tsy manasitrana na manaloka ny faritra misy vatohara rehefa mamahana izy ireo. Ny Grazers dia ahitana ny ankamaroan'ny bitro, ny lolo, ny hazandrano kely (avokoa Centropyge karazany), ary karazam-panafody maro (rehetra Zebrasoma ary Acanthurus karazany afa-tsy ireo izay miompana manokana amin'ny plankton na ireo grazers / detritivores). Ny Grazers / detritivores dia ahitana Acanthurus karazan-tsakafo izay mifototra amin'ny fitambolimbolam-bozaka alikaola, sedimenta ary fitaovam-biby.
Ravin-trondro mivezivezy amin'ny macroalgae. Sary © Stacey Kilarski
navigateur feed on macroalgae. Ny mpilalao dia mandray anjara mavitrika amin'ny fampihenana ny korontana sy ny fihenan'ny macroalgae, ary afaka mandray anjara mavesa-danja amin'ny famerenana ny fiovan'ny toetr'andro amin'ny alàlan'ny vatohara. Anisan'izany ny karazana saka, valala, basy, bitro, ary papiera Calotomus ary Leptoscarus.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFanaraha-maso ny vondron'anton'ireo karazan-trondro voajanahary ho endriky ny harena an-kibon'ny tanymanokatra fisie PDF